ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “နောက်ဆုံးခံတပ်”
လုပ်ပါအုံးငပေါရယ် ။ ငါတို.တွေဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောပါအုံး ။ ငါ့စကားနွားရ ပြောတတ်တဲ့မင်းကိုပဲ ဆရာတင်ပါတယ် ။
တချို့တွေကလဲ ဆရာ မလုပ်နိုင်တော့ မနာလို ဖြစ်ကြတာပေါ့ ကိုပေါရာ....
မနာလို ညခင်းကစပြီး သွေးကွဲခြင်းဆက်ညဖစ်ပါတယ်..။
ဘာက အဓိက ဆိုတာကို နားမလည်သရွေ့..လက်မခံသရွေ့...အမှန်တရားနဲ့ လွဲပြီးရင်း လွဲနေအုံးမှာပဲ...။ သွေးမစည်းတဲ့ နေရာမှာ ကမ္ဘာအရပ်၇ပ်က မြန်မာတွေက ထိပ်တန်းစာ၇င်းဝင်တယ်ဆိုတာ..အဝေးေ၇ာက် ညမန်မာတိုင်းလိုလို မပြောပေမဲ့ သိနေပြီးသားပါ..။
မကောင်းမှန်းသိရင် ကိုယ်ကစလို့ ချက်ချင်းပြင်မှပဲ...မြန်မာတပြည်လုံး ဒီမိုကရေစီ ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဘန်နာအောက်က animation က အရမ်းပေါ်လွင်တယ်...။
၈လေးလုံး အတွေးများ လာနွှေးရင်း..ကိုပေါရဲ့ animation poster လေးကို သဘောကျသွားတယ်။
SPDC's Dogs r vry punctual for barking once KP launchedasmashed post against SPDC, good job bloody fool dogs
You are right. however, eventhough everyone wants change and willing to sacrifice, they need right direction and leadership. the way i see it, only leadership comes from 88 generation group and no one else, even the NLD. and 88 generation leaders are so willing to sacrifice themselves that we have no one to rely on as leaders when the spdc put them away. i sometimes wonder if i will ever be able to go back to free and democratice BURMA.
I agree that we need urgently right leadership and direction in this moment. we can't expect and rely too much on NLD and others inside becoz they r struggling under wicked SPDC's traps so we had better to do for change as we can in our own ways, at the same time we should support that some outside groups r now trying to reunite and work together instead of non constructive criticizing like Myat Soe in Ko Moe Thee's web page that will profit nothing. let's keep aside our different views in this moment for our country.
Animation လေးကို တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျ။ ဘာနဲ့လုပ်သလဲ။
ဘလော့ဂ် template အသစ်ကလည်း အမြင်သစ်ဖြစ်စေတာပေါ့လေ။
ပန်ဒိုရာ…… Serif DrawPlus 6.0 တဲ့။ Popular Bookshop မှာ ၀ယ်လို့ရတယ်။ ၁၉.၉၅ ဒေါ်လာပေးရတယ်။ တန်တယ်လို့ ပြောရမယ်။
တန်းပလိပ်က သူများလုပ်ပြီးသား ရှာပြီး ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားတာပါ။ Stable တော့ မဖြစ်သေးဘူး။
အင်တာနက်မှာ ရှာလိုက်တော့ Serif DrawPlus က 8.0 အထိရှိတယ် ဆိုပဲ.. လောလောဆယ်တော့ ဖရီးပေးတဲ့ SE ဆိုတဲ့ version ကို ခဏစမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ